उद्यम रिपोर्टिङ र समाचार कथाहरू
विकासशील कथाहरू जुन प्रेस विज्ञप्तिभन्दा बाहिर जानुहोस्
राम्रो संवाददातालाई, कवर गर्न धेरै स्पष्ट रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् - एक घर आगो, एक हत्या, एक निर्वाचन, नयाँ राज्य बजेट।
तर समाचारहरू तीव्र हुँदा ती ढिलो समाचार दिनहरूको बारेमा के हो र जाँच गर्न लायक कुनै रोचक प्रेस रिलीज छैन?
ती दिनहरू राम्रो संवाददाताहरूले "उद्यम कथाहरू" लाई बुझेका छन् किनकि उनीहरूले धेरै संवाददाताहरूलाई सबै भन्दा इनामदायी पाएका थिए कि कथाहरू हुन्।
उद्यम रिपोर्टिंग के हो?
इन्टरप्राइज रिपोर्टिंगमा प्रेस विज्ञप्ति वा समाचार सम्मेलनमा आधारित कथाहरू समावेश छ। यसको सट्टा, इन्टरप्राइज रिपोर्टिंग सबै कथाहरु बारे एक रिपोर्टर आफ्नो आफ्नै मा खुल्छ, किन धेरै मान्छे "स्कूप्स।" इन्टरप्राइजिंग रिपोर्टिंग मा केवल कवर को घटनाहरु लाई बाहिर जान्छ। यसले ती घटनाहरूको आकारलाई बलियो बनाउँछ।
उदाहरणका लागि, हामीले सबैलाई cribs, खिलौने र कार सीटहरू जस्ता बच्चाहरूसँग गलत र सम्भवतः खतरनाक उत्पादनहरूको बारेमा सम्झना सुनाएका छौं। तर जब शिकागो ट्रिब्यूनमा पत्रकारहरूको टोलीले यस्तो सम्झना देखायो तिनीहरूले यस्ता वस्तुहरूको अपर्याप्त सरकारी नियमनको ढाँचा खोजे।
त्यस्तै गरी, न्यूयर्क टाइम्स रिपोर्टर क्लिफर्ड जे लेवीले अनुसन्धान-आधारित कथाहरूको एक श्रृंखला गरे जुन मानसिक नियमन भएका घरहरूमा मानसिक रूपमा बिरामीको दुर्व्यवहारको बारेमा थाहा पाईयो। ट्रिब्युन र टाइम्स दुवै प्रोजेक्टले पिलिस्जर पुरस्कार जिते।
उद्यम कथाहरूको लागि विचार खोज्दै
त्यसोभए तपाई कसरी आफ्नो उद्यम कथाहरू विकास गर्न सक्नुहुन्छ?
अधिकांश संवाददाताहरूले तपाईंलाई बताउनेछन् कि यस्ता कथाहरूलाई खुलासा गर्न दुई प्रमुख पत्रकारिताका कुशलताहरू छन्: अवलोकन र अनुसन्धान।
अवलोकन, जाहिर छ, तपाईंको वरपर संसार देख्न सक्दछ। तर जब हामी सबै चीजहरू देख्छौं, पत्रकारहरूले कथा विचारहरू सिर्जना गर्न आफ्नो अवलोकनहरू प्रयोग गरेर एक कदम अगाडी अवलोकन गर्छन्।
अर्को शब्दमा, एक जना संवाददाता जो रोचक कुरा देखेर लगभग आफैले सोध्छन्, "यो एक कथा हुन सक्छ?"
चलो भन्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो टैंक भर्न ग्याँस स्टेशनमा रोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले ग्याँस ग्याँसको मूल्य फेरि उठेको छ। हामीमध्ये प्रायः यसको बारेमा गम्भीर हुनेछ, तर एक पत्रकारले सोध्न सक्छ, "मूल्य किन बढ्दैछ?"
यहाँ एक अधिक मन्डेन उदाहरण पनि छ: तपाईं किराना स्टोरमा हुनुहुन्छ र ध्यान दिनुहोस् कि पृष्ठभूमि संगीत परिवर्तन भएको छ। पसलले नींद आर्केस्ट्रा सामानहरू खेल्न प्रयोग गरेको थियो जुन शायद 70 भन्दा कमको कुनै पनि रमाइलो हुनेछ। अब स्टोर 1980 र 1 990देखि पप ट्यूनिंग खेलिरहेको छ। फेरि, हामीमध्ये अधिकांशले यसबारे छोटो सूचना लिनेछ, तर एक राम्रो संवाददाताले सोध्नेछ, "उनीहरूले किन संगीत परिवर्तन गरे?"
ध्यान दिनुहोस् कि दुवै उदाहरणहरू परिवर्तन हुन्छन् - ग्यासको मूल्यमा, पृष्ठभूमि संगीतमा खेले। परिवर्तनहरू सधैं केहि खोज्ने पत्रकारहरू हुन्। एक परिवर्तन, सबै पछि केहि नयाँ छ, र नयाँ घटनाक्रम कुन पत्रकारहरु को बारेमा लेख्छन्।
इन्टरप्राइज संवाददाताहरूले पनि समयको साथ हुने परिवर्तनहरूका लागि पनि हेर्छन् - प्रवृत्तहरू, अन्य शब्दहरूमा। एक प्रवृत्ति खोज्दै प्राय: एक उद्यम कथा सुरु गर्न एक राम्रो तरिका हो।
तपाईले ध्यान दिनुहुनेछ कि दुवै उदाहरणहरू रिपोर्टरले "किन" केहि कुरा गरिरहेको सोधे।
"किन" सम्भवतः कुनै पनि संवाददाता शब्दावलीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द हो। एक रिपोर्टरले सोध्छ किन केहि कुरा भइरहेको छ, उद्यमको रिपोर्टिङको अर्को चरण सुरु हुन्छ: अनुसन्धान।
अनुसन्धान वास्तवमा प्रतिवेदनको लागी एक फैंसी शब्द हो। यसमा साक्षात्कार गर्न र इन्टरप्राइज स्टोरीको विकास गर्न सूचना खोल्ने समावेश गर्दछ। एक उद्यम रिपोर्टरको पहिलो कार्य केही प्रारम्भिक रिपोर्टिंग गर्न को लागी छ कि त्यहाँ वास्तवमा एक रोचक कहानी बारे बारेमा लेखिएको छ (सबै रोचक अवलोकनहरू रोचक समाचार कथाहरू बाहिर निस्किन्छन्।) अर्को चरण एक उत्पादन उत्पादन गर्न आवश्यक सामग्री एकत्रित गर्नु हो। ठोस कहानी।
त्यसैले रिपोर्टरले ग्याँसको मूल्यमा वृद्धिको अन्वेषण गर्न सक्छ कि मेक्सिकोको खाडीमा भएको हावाइले तेलको उत्पादनमा ढिलो पारेको छ, मूल्य मूल्य बढ्दै गएको छ। र परिवर्तनशील पृष्ठभूमि संगीतको रिपोर्ट गर्न सकिने रिपोर्टरले पत्ता लगाउन सक्छ कि यो सबै तथ्यको बारेमा हो कि ठूला किराना पसलहरू यी दिनहरू - आमाबाबु बढ्दै जान्छ - 1980 र 190 99 मा उमेरको उमेरमा र उनीहरूको जवानमा लोकप्रिय थियो कि संगीत सुन्न चाहन्छन्।
उदाहरण: कम्युनिष्ट पेयको बारेमा एक कथा
चल्नु एक अर्को उदाहरण हो, यो एक प्रवृति समावेश छ। चलो तपाईं आफ्नो गृहनगर मा पुलिस रिपोर्टर हुनुहुन्छ भन्न दिनुहोस्। प्रत्येक दिन तपाईं पुलिस मुख्यालयमा हुनुहुन्छ, गिरफ्तार लग जाँच गर्दै। धेरै महिनाको अवधिमा, तपाईले स्थानीय हाई स्कूलका विद्यार्थीहरू बीच कम रक्तचापका लागि गिरफ्तारीमा एक स्पाइकलाई ध्यान दिनुहुन्छ।
तपाईं सीप साक्षात्कार गर्नुहुन्छ कि हेरफेर-अप प्रवर्तन वृद्धिको लागि उत्तरदायी छ भने। तिनीहरू कुनै भन्छन्। त्यसोभए तपाईं हाई स्कूलको प्रिन्सिपल साथ साथै शिक्षक र सल्लाहकार साक्षात्कार गर्नुहुन्छ। तपाईं विद्यार्थी र आमाबाबुलाई पनि कुरा गर्नुहुन्छ र पत्ता लगाउनुहुन्छ, विभिन्न कारणहरुका लागि, कम पीडा बढ्दै छ। त्यसैले तपाईंले कमल पिउने समस्याको बारेमा एक कथा लेख्नुभयो र तपाईंको गृहनगरमा यो कसरी वृद्धि हुन्छ।
तपाईले उत्पादन गरेको एक उद्यम कथा हो, एक प्रेस विज्ञप्तिमा आधारित वा एक समाचार सम्मेलन, तर तपाईंको आफ्नै अवलोकन र अनुसन्धानमा।
इन्टरप्राइज रिपोर्टिंग फिचर कथाहरु बाट सबै कुरा समावेश गर्न सक्दछ (पृष्ठभूमिमा संगीत परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भवतः त्यो कोटी हुनेछ) अधिक गम्भीर खोजी टुक्राहरूमा, जस्तै कि ट्रिब्यून र टाइम्सले उल्लिखित उद्धृत गर्दछ।
मेरी पार्कर फोललेट उद्धरण
इटालियनमा शब्द "डायरेक्ट" कन्जुगेट कसरी गर्ने?
एक्स रे परिभाषा र गुण (एक्स विकिरण)
चित्रित लेडी (भेनेसा कार्डियुइ)
मिथकहरूको अर्थ, लोकगीत, किंवदंतियों, र परी कथाहरू
"अमेरिकाको अर्को शीर्ष मोडेल" को कुन सबै स्टार स्टार चक्र 17?
Rosetta स्टोन: एक परिचय
भाषात्मक कार्यात्मकता के हो?
निष्पक्ष र पूर्वाधार एटीमिटर
दायाँ-हातमा खेलाडीहरूको लागि कसरी ब्लिङ स्पेस छनौट गर्नुहोस्
प्राय: ब्रिटान्ट ओपन च्याम्पियनस कुन गोल्फर?
इटालियन Verb Conjugations: 'Salire'
बृहस्पतिको रूपमा तपाईंको भाग्य क्षितिज घरहरू ट्राफिक गर्दछ
सतह क्षेत्र द्वारा अमेरिका मा सबै भन्दा ठूलो झीलों
माउन्ट शास्टा चढाई तथ्य
शीर्ष5रोलिंग स्टोन गाने '80s को
मैले आफ्नो संगीत कसरी Spotify मा प्राप्त गर्न सक्छु?
Tzedakah: दान भन्दा बढी
मानव ब्रेन को प्रतिशत को प्रयोग गरिन्छ?